Xuska 15aad ee maalinta Xoolo-dhaqatada DDSI oo Maanta si wayn Looga Xusay jigjiga. - Cakaara News
Xuska 15aad ee maalinta Xoolo-dhaqatada DDSI oo Maanta si wayn Looga Xusay jigjiga.
Jigjiga(CN) Talaado Jan-20-205.Waxaa maanta si balaadhan looga xusay caasimada deegaanka ee jigjiga xuska 15aad ee maalinta xoolo dhaqatada DDSI. Munaasabadii lagu xusayay maalintan oo ka dhacay hoolka shirarka ee kuliyada Maamulka iyo Maaraynta DDSI .
Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qaybgalay qaarka mid ah masuuliyiinta xukuumada DDSI ugu saraysa oo uu ka mid yahay madaxwayne ku xigeenka DDSI ahna wasiirka waxbarashada mudane mawliid haayir xasan, golaha capinetka golaha wasiirada iyo xubno xoolo dhaqato ah oo laga soo xulay degmooyinka deegaanka.
Munaasabadan ayaa waxaa ugu horayntii khudbad dhaxal gal ah ka soo jeediyay madaxwayne ku-xigeenka DDSI ahna wasiirka waxbarashada DDSI mudane Mawliid Haayir Xasan oo si qoto dheer uga warbixiyay mudnaanta iyo ahmiyada maalintani leedahay wuxuna sheegay in ay maalintani tilmaan u tahay gaadhsiinta bulshada horumar waara iyo gaadhsiinta adeegyada aas aasiga ah ee bulshada xoolo dhaqatada iyo kuwa xoolo dhaqato beeralayda ah.
Wuxuuna sheegay madaxwayne ku xigeenku in ay xukuumadu sanadihii ugu danbeeyay dadaalo xoogan saartay sidii kor loogu qaadi nolosha bulshada xoolo dhaqato ah iyo kuwa xoolo dhaqato beeralayda ah, waxaa kale oo uu tilmaamay madaxwayne ku xigeenku in ay xukuumadu sii xoojinayso dadaalkeeda ku qotoma kor u qaadada noloshada bulshada xoolo dhaqatada ah iyo kuwa xoolo dhaqato beeralayda ah si uu deegaanka isku filnaansho u gaadho.
Waxaa kale oo isaguna musaasabadaasi ka hadlay wasiir ku xigeenka xoolaha beeraha iyo horumarinta Reermiyiga mudane Cabdi-nuur Colow oo si qoto-dheer uga warbixiyay dadaalada uu xafiiska ugu jiro hirgalinta qorshayaasha horumarineed ee ku aadan dhinaca bulshada xoolo dhaqatada ah iyo kuwa xoolo dhaqato beeralayda ah.
Munaasabada 15aad ee Xuska Maalinta Xoolodhaqatada DFI ee heer Deegaan lagu xusay ayaa intii ay socoday waxaa la bixiyay abaalmarino la gudoonsiiyay qaarka mid ah degmooyinkii noqday haldoorka horumarka bulshada xoolo dhaqatada ah guulo la taaban karana ka soo hooyay horumarka iyo abaabulka bulshada xoolo dhaqato ah ee ku dhaqan degmooyinkaasi kuwaasi oo hirgaliyay siyaasada iyo himilooyinka xukuumada ee ku qotoma horumarinta bulshada xoolo dhaqatada ah waxaana degmooyinka la gudoonsiiyay abaalmarinta ee kaalinta 1aad iyo ta 2aad galay ahaayeen degmada Hudhat ee Gobolka liibaan iyo degmada Shiilaabo ee Gobolka qoraxay.
Waxaana abaal marintaasi gudoonsiiyay madaxwayne ku xigeenka DDSI ahna wasiirka waxbarashada mudane Mawliid Haayir xasan. Sidoo kale waxaa iyaguna abaalmarino la gudoonsiiyay xubno ka mid ah bulshada xoola dhaqatada ah oo guulo ku dayasha mudan ka soo hooyay dhaqashada xoolaha iyo iskaashatooyin kaalmaha hore ka galay dhaqashada xoolaha kuwaasi oo ay abaalmarinta gudoonsiiyeen wasiirka adeega shacabka iyo kobcinta awooda maamulka DDSI marwo maajida maxamuud maxamed iyo wasiirka ka hortaga masiibooyinka DDSI mudane maxamed daahir.
Munaasabadan oo ay kooxaha fanka iyo suugaanta DDSI ku soo bandhigayeen heeso iyo dhaantooyin ka turjimaya ahmiyada ay maalintani u leedahay bulshada ayaa waxaa kale oo ka soo qaybgalay munaasabadan 2 da mujaajulaysta ee aan waayadan lagaga daba dhufan marka ay noqoto dhinaca majaajulada guud ahaanba galiyga soomaalida waa Sooraan iyo Jawaane.
Sooraan iyo jawaan oo maalmahanba ku sugaan Xarunta deegaanka ayaa munaasabadaasi ka soo jeediyay gabayo ay ugu hanbalyaynayaan deegaanka horumarka ay gaadhay xukuumada deegaanka mujaajulaystaha wayn ee sooraan ayaa ka qaaday munaasabadaasi dhaanto aad u murti badan oo uu tilmaamayo guulaha waawayn ee ay xukuumadu ka soo hoysay dhinacyada horumarka iyo nabadgalyada